January 30, 2009, 3:18 am Filed under: Others ကျောင်း ၊ အိမ် ၊ မိသားစုအသိုင်းဝိုင်းများနဲ့ နေ့စဉ်လည်ပတ်နေရင်း ဖုန်တက်နေတဲ့ ဘလော့ခ်လေးကို “မဖြစ်သေးပါဘူး”ဆိုတဲ့ အတွေးလေးဝင်ပြီး ကျွန်မပြန်ဦးလှည့်လာခဲ့တယ်။ ဖြစ်ချင်တာတွေလည်း ပျော်ရွှင်စွာ ဖြစ်မြောက်ခဲ့ရင်း ဘ၀ဆိုတဲ့လမ်းမပေါ် သူလိုကိုယ်လိုပဲ လျှောက်ရင်း မတူညီတဲ့ လမ်းမတစ်ခုပေါ်မှာ မျှော်လင့်ချက်အဟောင်းတွေ ဖြစ်မြောက်ရှင်သန်ရင်း ပြောင်းသင့်တာတွေလည်းပြောင်း ၊ သင်ယူသင့်တာတွေလည်း ကြိုးစားသင်ယူ ၊ အကောင်းဆုံးကြိုးစားရင်း ကိုယ်လျှောက်ချင်တဲ့ လမ်းမသစ်တစ်ခုပေါ်တော့ အရာအားလုံး အခြေကျသွားခဲ့ပြီ။စိတ်ထဲမှာ တွေးမိတာတွေ ၊ ဖတ်ရှုလေ့လာမိတာတွေတော့ ဒီလအတွင်း အတော်များပြားရှုပ်ထွေးခဲ့ပါရဲ့။ ဆိုးရွားနေတဲ့ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးအခြေအနေမှာ ကြားနေရတဲ့ မကောင်းသတင်းတွေကလည်း နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာတွေမှာ ပျံ့နှံ့လို့။ မအေးချမ်းတဲ့ ကာလကြားမှာ ခက်ထန်တဲ့ဒီလမ်းခရီးအလယ် အဓိကဖြတ်ကျော်ကူးနေရသူ ကိုယ်မဖြစ်သေးလို့ အနည်းငယ်စိတ်သက်သာရာ ရမိပေမယ့် မခံစားနိုင်ဘဲ အရှုံးပေးသွားတဲ့ လူတွေအတွက်တော့ အတော်လေးစိတ်မကောင်း ဖြစ်ခဲ့မိတယ်။ ဖြစ်ပျက်သမျှဟာ ကောင်းဖို့ဖြစ်လာတယ်လို့ သတ်မှတ်ရင်း နှစ်ပေါင်း(၆၀)အတွင်း အကျပ်တည်းဆုံး ၊ အပြင်းထန်ဆုံး ဒီအခက်အခဲဟာ လူတွေအားလုံးကို အဖိုးတန်သော သင်ခန်းစာပေါင်းများစွာ ပေးနိုင်မယ်လို့ပဲ သုံးသပ်မိတယ်။ အေးချမ်းသာယာသော “အိမ်”များနှင့်အတူ မိသားစုများအားလုံး ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့မှုအလင်းရောင်များ ထွန်းညှိနိုင်ဖို့ မျှော်လင့်ယုံကြည်လျက် …။ Like this:Like Loading...
January 30, 2009 @ 11:29 am Reply	၀တ္ထုလေးတွေ ရေးဦးလေ ညီမလေးပြန်လာတာဝမ်းသာတယ်။
January 30, 2009 @ 12:58 pm Reply	လမ်းမသစ်ပေါ်မှာ ကိုယ်ချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးပျော်ရွှင်ပါစေ ညီမရေ။ ပို့ စ်အသစ်တွေလည်းမျှော်နေမယ်။
January 30, 2009 @ 2:11 pm Reply	Nyi Ma yay,Long time no see naw!New post plz😀
February 2, 2009 @ 8:59 am Reply	ပြန်ရေးပြီပေါ့ ညီမလေး။ သာယာချမ်းမြေ့ပါစေ..
Comment by Mr.Guiter
February 7, 2009 @ 11:40 am Reply	blog ကိုလွမ်းတာ သဘာဝကျပါတယ်ကွယ်၊ခေတ်ကိုတော့ မျက်ခြည်မပြတ်စေနဲ့ပေါ့ငါ့ညီမလေးရာhttp://i725.photobucket.com/albums/ww253/antisukyi1/9935ce2d.jpgလောကကြီးမှာ အမှန်တရားတွေရှိတယ်နော်
Comment by ဘ၀ .... ဆိုသည်မှာ
May 13, 2009 @ 8:45 pm Reply	RSS feed for comments on this post.	TrackBack URI